China 4D HIFU Umkhiqizi kanye Umthengisi | Hondee
CO2 wamaqhuzu laser KOMZIMBA MACHINE
Wamaqhuzu RF GOLDEN Needle MACHINE
Siyakwamukela Ukuze HONDEE
Nge esiyingqayizivele ephezulu amandla ayo igxile ultrasound, ultrasonic ngokugxila kungaba ngokuqondile ukufinyelela SMAS ungqimba, ukukhuthaza ukumiswa SMAS fascia, futhi icubungulisise ukuxazulula nokuwohloka nokungcebeleka izinkinga ebusweni. It ngokunembile kuveza amandla ultrasonic ngesikhathi 4.5mm fascia ungqimba ngaphansi kwesikhumba.
Zethu umkhiqizo omusha zakamuva 4D multi-line ultrasonic ubuhle ithuluzi ingafinyelela imiphumela emithathu esiphelele isikhumba tightening, umbimbi ukususwa, ekwakheni body.The ingxenye eziphambili kakhulu 4D multi-line ubuhle ultrasonic sensimbi ukusetshenziswa amandla eziphambili kakhulu ultrasonic, okuyinto ungakwazi engena ijule SMAS ungqimba kwesikhumba, okubangela ukusikwa ngokushesha collagen futhi zikhuthaza collagen fibre network ukuze ithuthukise isikhumba kuyaqina kusukela ungqimba phansi (mshini self-ukulungisa kuphephile) .Le kuyindlela ephephile futhi ephumelela kunazo uswidi isikhumba ebusweni ukuguga nokuwohloka ku industry.It ubuhle cross-inkathi amaningi ubuhle ithuluzi ngaphandle isilonda, ukululama, ukopha. 4D multi-line ubuhle ultrasonic insimbi, i-imilingo ekususeni imibimbi futhi sithuthukisa kusebenta iye obonwa izikhungo onegunya e-United States, futhi njengoba isimangaliso intsha bobusha eyaziwa!
1. Two izindlela: mode okusheshayo noma Imodi kancane kungenziwa luvulwe.
2. enkulu yemigqa 11 ingasetshenziswa uhlwayi olulodwa, futhi esiphezulu amandla ndawo 10mm ububanzi. nemingcele elihambisana kungase kushintshwe ngokuvumelana usayizi wendawo isikhumba, ezivuma isikhathi msebenzi mfushane kakhulu, ukwenza imiphumela amandla iphuzu kwi isikhumba iyunifomu ngaphezulu, futhi umphumela ekwelapheni kungcono.
3. Usebenzisa kakhulu eziphambili zobuchwepheshe ubuchwepheshe, yona ifakwe amakhanda yokwelashwa ababili ngokwendlela isimo isikhumba ebusweni, esithinta ngokunembile ekujuleni ezahlukene esikhumbeni, ukuze amandla kancane phezu epidermis ngesikhatsi ukwelashwa, futhi 100% ngaphandle umonakalo .ngesikhathi esifanayo,
Ngesikhathi esifanayo, le kwesikhumba iphathwa ikhanda ukwelashwa ukujula liyalingana value set, ukuqinisekisa kobuhlungu yekhasimende futhi zikhululekile.
4. Ngaphezu umphumela ezishisayo ku-collagen dermal collagen fibre, libuye libe ukushukuma ezishisayo ku namanoni ungqimba futhi fascia ungqimba (SMAS), kanye nomphumela oqabulayo ikude kungcono kunokwabanye Thermage.
5. Ukusebenza ilula futhi elula, asikho isidingo okudlekayo, ukunciphisa kakhulu izindleko ukwelashwa.
6. Umthelela kokuqina futhi ekwakheni kungabonwa ngokushesha emva kokwelashwa, engahlala izinyanga okungenani 18-24 ngesikhathi, futhi nokukhula komnotho emibi isikhumba age kanye ngonyaka.
7. Makeup ngokushesha emva kokwelashwa akuphazamisi ukuphila okuvamile kanye nomsebenzi.
Igama wensimbi Izingxenye
Iphrofayela obusebenzayo zokwelapha Shona
Wathi: The iphenya ezilandelayo ukuze umzimba: 16mm, 13mm, 10mm, 8mm 6mm, probe ohambelana kungenziwa kukhethwe ukuba ukuphathwa izitho zomzimba ngendlela ehlangabezana nezidingo.
Faka umugqa isibambo socket ngakwesokunene umshini futhi silungise ngezikulufo, plug intambo ku kwesokunxele amandla isokhethi bese uxhuma amandla supply umugqa efanelekayo voltage ngaphakathi evamile yokusebenza ibanga insimbi. Ukufakwa probe aboniswe ngezansi.
Hlola ukuthi uxhumano wezinsimbi zomculo kuyinto evamile, switch on amandla insimbi bese ucindezela inkinobho amandla phezu kwempi, umshini ukuzoqala futhi kubonakala ukuqalisa esibonakalayo. (Isithombe njengoba ngezansi)
Ngemva kokuchofoza ebhuthini esibonakalayo, ngokuzenzakalelayo engena professional umsebenzi esibonakalayo (izithombe njengoba ngezansi).
2. Function isingeniso professional umsebenzi esibonakalayo.
▲ ngenhla yilona letiphakanyisiwe amandla value for ingxenye ukusebenza Uphenyo ngamunye ngamunye. (Uma izivakashi Ungase futhi ibhere ngalinye futhi zilungiswe ngokufanele, Kuyafaneleka ukuba izivakashi ukuba ababuzwa ubuhlungu kabuhlungu.)
Operational inyumbazane zone : Gwema hairline, amathempeli, amehlo (zamehlo), Yintang, ekhaleni, udebe eliphezulu, kwesilevu, amalaka, aorta nasenkabeni.
Izinyathelo okusebenza kwe-instrument
1. Ngaphambi kokusebenzisa ithuluzi, zokukhipha igciwane futhi Sula probe ngotshwala ukomisa amanzi ebusweni.
2. Sebenzisa gel umkhiqizo (gel photosensitive) ngokulinganayo endaweni ukuphathwa ngayo.
3. Ngaphambi ukusebenza kwe-ithuluzi, esikhundleni kudingeka ikhanda ukwelashwa kanye ulungise energy kusuka phansi kuya phezulu ebangeni ukuthi experiencer zingamelana.
4. Ngesikhathi kokuhlinzwa, ikhanda ukwelashwa kufanele igcinwe flat ngokumelene isikhumba, kanye Isikhala ukusebenza kufanele zihlelwe eduze.
5. Ngo inqubo ukusebenza, kufanele njalo cela experiencer mayelana induduzo ukulungiswa yobukhulu amandla ukuqinisekisa ukuthi experiencer uthola isipiliyoni esimweni emnandi.
6. okuphindaphindayo ukwelashwa olunzulu kusayithi inkinga (izikhathi 2-3).
Ukubeka Ukwelashwa Amaphatho
ububanzi Clearance amandla Pitch ubude
isikhumba Jwayelekile 8-10
3times / Inkambo yokwelashwa
1 isikhathi / izinyanga 2-3 izikhathi 5 / Inkambo yokwelashwa
Okumele kuqashelwe futhi Isondlo
2. ipulaki nge isisekelo pin kumele kusetshenziswe ngaphambi kokusetshenziswa, futhi ukuqinisekisa ukuthi amandla isokhethi wezinsimbi zomculo lihlala ngempela.
Contraindication of instrument Abasebenzisi
1. Ngemuva kokusebenzisa ithuluzi, sicela uhlanza ngayo utshwala magciwane futhi uyigcine kahle.
Technical Amapharamitha futhi Iphakheji Usayizi
igama lomkhiqizo: 4D Muti yomugqa Anti-ukuguga Nobuhle wensimbi
ikhanda Ukwelashwa: 1.5,3.0,4.5,6.0,8.0,10,13,16 kungaba ukhethe.
voltage wokufaka: AC110V - 220V
Lokukhipha imvamisa: 4-7MHz
Lokukhipha voltage: 10-200W
Usayizi Air ibhokisi: 20 × 40 × 54cm
Isisindo: mayelana 11kg (Do akuhlanganisi base)
Previous: 4D 3in1 HIFU + lekubazeni + kwesitho sangasese kokuqina
Okulandelayo: CO2 wamaqhuzu laser KOMZIMBA MACHINE
4D 2IN1 HIFU + kwesitho sangasese kokuqina
Kusukela yasungulwa, imboni yethu ubulokhu imikhiqizo ekilasini yezwe yokuqala ukunamathela isimiso
quality lokuqala. Imikhiqizo yethu umzuzile idumela elihle kakhulu kulo mkhakha kanti valuabletrusty phakathi amakhasimende amasha namadala ..
2nd Floor, Isakhiwo A, Shiguan Hondee Industrial Park, Tongsheng Community, Dalang Street, LongHua District, Shenzhen, Isifundazwe Guangdong, PR China 518000
Derma Wand Izinwele Emzimbeni Machine Nobuhle Izinsiza kusebenza , Liposonix Ukuze umzimba ekwakheni , Hair Removal Device Home Use, ebusweni Nobuhle Izinsiza kusebenza , Double Chin Removal, Ugxilile ultrasound ,